SHR IPL Fekitori | China SHR IPL Vagadziri uye Vatengesi
FDA uye TUV Medical CE yakatenderwa SHR IPL Chishandiso
SHR IPL Therapy System inobata wavelength kubva pa420nm kusvika pa1200nm. Yakasiyana wavelength inogamuchirwa kurapwa kubva pane zvekuchipatara zvinodiwa. Iyi sisitimu inotarisa pakurapa
akasiyana marudzi emakiriniki anoratidza kusanganisira pigmented
maronda uye zvirwere zvevascular pamwe nekubvisa bvudzi uye kugadziridza kweganda, kubvisa acne uye zvichingodaro, zvinogamuchirwa neDFA neEC.
Mudziyo unenge uine ruviri ruoko: HR uye SR, VR yesarudzo.
HR handlepiece ichave iine matatu anoshanda modhi, SHR inoshanda modhi yekubvisa bvudzi bvudzi, FP modhi yezvinhu zvine mutsindo kubvisa bvudzi, uye zvakajairwa IPL modhi.
SR inobata chigadziko chekugadzirisa ganda, kubvisa acne uye kubvisa pigmentation
VR inobata ruoko rwekubvisa vascular, red vein kubvisa
Inotakurika SHR IPL Chishandiso
Iyo yepamberi yakasimba yekupomba mwenje (IPL) tekinoroji inopa akasiyana wavelength yechiedza kune asiri-anovhiringidza uye echokwadi ekurapa mhinduro kuti awane kwakakosha kuita pamwe neakawanda makiriniki marekodhi. Chiedza chinogona kupenya dermis kune chakanangwa matishu, ayo anozoparadzwa nekupisa kwechiedza, ndokuzomedza nekubvisa muviri nemetabolism
Yakanyanya kupomba mwenje (IPL) yakasanganiswa neRadio Frequency (RF) tekinoroji, iyo inogona kuita kuti mwenje wesimba udzike pasi peepidermis, ichipwanya iyo pathological cell uye ichikurudzira collagen kuti idzokerezve, ichichenesa ganda rakachenesa uye rakapfava pasina divi mhedzisiro.
Kubvisa bvudzi kwakanyanya (SHR) kunoshanda zvakanyanya nehukuru hwechigumi nemakumi mashanu nemazana mashanu pane kurapa kwakazara. Iyo ndiyo yakanaka mamiriro enzvimbo hombe isingadiwe kurapwa bvudzi isina kurwadziwa.
Iyo premium Optimal pulse tekinoroji (OPT) inopa yakateedzana uye yunifomu simba kuburitsa, senge yakakwana yepamusoro-ngowani maitiro, zvakare inopa yakachengeteka uye nekukurumidza kurapwa maitiro pasina pasi nguva.
IPL Nd YAG Laser RF 3 mu 1 Mudziyo
RF iRadio Frequency, inoshandisa yayo yakasarudzika tekinoroji tekinoroji, inonyatso kudzora kuchinjaniswa kweiyo polarity, kumisikidza yakanakisa frequency. Nekuti iro ganda reganda rine dziviriro yechisikigo kune iyo electrode shanduko, inozoguma nekupisa iyo collagen. Iyo collagen inochinja hunhu hwayo, inowedzera kuberekwazve kweyekutanga fiber sero uye kuvakwazve kweiyo collagen, inozoita kuti ganda riome, rienzane uye nyoro .
ND YAG Laser Dzidziso:
Nd yag laser inoputika simba rakakura munguva pfupi, mushure mekumwisa iyo laser simba, iyo pigment mune iyo tattoo yakatyoka ipapo ipapo, yozoita diki pigment boka, pakupedzisira kubuda mumuviri uine metabolism. Zvichakadaro, zvakare inogona kuita dema dhora ganda kumutsiridza kurapwa, uchishandisa akaomeswa macaroni akasarudzika maitiro, kupinda mukati pores, kunotora girisi uye tsvina. Laser mwenje inomutsidzira kumutsidzirwa kwe dermal collagen uye kudzikira kweiyo collagen fibers, kusvika pakuita kuchena, kujekesa pigment, pores kudzikira uye matema kubvisa mhedzisiro.
SHR IPL Dzidziso:
Yakakwana SHR (Super bvudzi kubviswa) yepakati tekinoroji, uchishandisa matatu-epamhepo tekinoroji pfungwa: simba + upamhi + kupomba waveform. SHR iyi yakagadziridzwa vhezheni yeE mwenje, iri kukurumidza kupfuura E mwenje. OPT yakakwana kurovera tekinoroji, iro izwi rinogona kunge risingazivikanwe nevanhu vazhinji, kutaura zvazviri, kunyanya muOTT tekinoroji Hardware uye yakaita yakawanda yekuvandudza, musimboti unokwanisa kunyatso kudzora kwega kwega kurova, izvo zvinoita OPT mune yekurapa mhedzisiro. kukosha kwakakosha kwekuwedzera kuri pamusoro, kunyanya mukutanda, kubvisa bvudzi, kugadzirisa ganda